Fanadihadiana Fanontaniana - Valiny | Cyber-Security Professionals | NY
Fanontaniana ifanakalozan-kevitra - Valinteny ho an'ireo mpitsikera amin'ny fiarovana an-tserasera
Mivoatra haingana ny fandrosoana, ary ny loza mitatao ho an'ny fiarovana an-tserasera dia miezaka mafy ho fantatra. Ho an'ny vondrona maoderina mpikirakira maoderina, ny fomba mahazatra amin'ny fametrahana ny loza dia tsy voatery hentitra intsony. Noho izany, ireo manam-pahaizana momba ny fiarovana amin'ny aterineto dia miankina amin'ny fampitomboana ny fahaizan'izy ireo mamaritra ny fiovan'ny toetrandro. Manome torohevitra sy fanohanana manokana izy ireo hanampy ny mpanjifa hanatsara ny asa fiarovana sy ny risika. Ireto misy fanontaniana vitsivitsy amin'izy ireo:
Fanontaniana sy valiny momba ny fanadihadiana 20 momba ny Cyber-Security Professionals
Inona no anananao ao amin'ny rafitra misy anao?
Inona ny "SQL fitaovana"?
Inona no fifandraisana SSL sy SSL?
Inona avy ireo fomba telo hanamarinana lehilahy iray?
Fomba samihafa amin'ny fitiliana fitsapana?
Inona avy ireo vulnerabilities amin'ny tranonkala?
Inona ny Traceroute na tracert?
Linux fiarovana fiarovana: Dingana telo ho an'ny fiarovana ny rafitra rehetra
Inona no sira ary inona no ampiasaina?
Segment ampiasaina ho SSL?
Inona ny famoretana WEP?
Parameters izay mamaritra ny fepetra SSL?
Ahoana no hahazoanao antoka ny Wireless Access Point home?
Inona avy ireo toetra amam-pahalalana momba ny fiarovana?
Inona no atao hoe scan?
Inona no atao hoe phishing?
Inona ny HIDA?
Ny PC misy portable Windows miaraka amin'ny famindrana tsy misy fametahana lavitra, antso an-tariby faran'izay haingana hatramin'ny 14 Linux Workstations, ny Active Directory Domain Controller, dia nomena ny fitaovana Firewall sy ny toetoeran'ny tambazotra.
Inona ny tetikasa noraisinao no hilazanao fa tena faly ianao?
Na inona na inona ny tetikasanao amin'ny maha-olona anao amin'ny fotoana voalohany raha nanitsy ny fampihetseham-pihetseham-po ianao na nanangona ny PC voalohany anao na manakiana ny famoronana programa iray, ny tanjon'ity fanontaniana ity dia ny maneho ny hafanam-ponao. Izany dia nampianarina teo am-piomanana ny fiarovana amin'ny serasera.
Izany dia iray amin'ireo tetikady manakantsakana tsy tapaka ampiasain'ny mpandahateny mba hahazoana angona fototra. Ny mpizaha programa dia manamarina fa misy loopitra misokatra ao amin'ilay rafitra izay ahafahany mametraka fanontaniana SQL, izay manalavitra ny fanamarinana fiarovana ary mamerina ny angona fototra.
Ny fifandraisana SSL dia interface interface mifandraika amin'ny fifandraisana izay misy fifandraisana tsirairay mifandraika amin'ny session SSL. Ity fotoam-pivoriana ity dia azo sokajiana ho fifandraisana eo amin'ny mpanjifa sy ny server, amin'ny alàlan'ny sy ny tambazotra lehibe amin'ny protocopie tanana.
Zavatra iray izay ananany (marika), zavatra fantany (sekretera miafina) ary zavatra iray izy ireo (biometrika). Ity fanamarinana ity ny sasany amin'ny fotoana dia mampiasa teny miafina sy famantarana fananganana, na dia mety ho PIN sy thumbprint aza indraindray.
White Box-Ny rakitra rehetra dia nomena ny mpandinika, Black Box-Tsy misy nomena ireo mpandinika ary azo jerena ny rafitra amin'ny toe-javatra azo antoka, ny data amin'ny Gray Box-Partial dia miaraka amin'ireo mpandinika sy fitsaharana izay ilainy irery.
Ny vulnerabilitie tsy ahafahan'ny mpizara tranonkala manaisotra dia: Ny tsy fahita firy, ny fikandrana ny Default, ny Bugs amin'ny rafitra miasa ary ny tranonkala web.
Azonao atao ny mamantatra ny toerana misy ny fisarahana amin'ny fampisehoana aminao ny sehatra fifandraisana mety amin'ny fifindrana mba hivezivezy amin'ny tanjona farany.
Ny dingana telo hiarovana ny rafitra rehetra: Fanaraha-maso, fanamafisana, fanaraha-maso.
Ny mpangataka anao dia maneso ny teny miafina miafina saingy miezaka ny hisintona anao amin'ny fampiasana ampahany betsaka amin'ny teny. Azo antoka kokoa ny sora-baventy ho an'ny tenimiafina ary fehezanteny iray tokony ho fantatrao sy haka izany.
SSL dia ampiasaina mba hahazoana fifandraisana azo antoka eo amin'ny PC sy ny mpanjifa. Naka ny segondra nampiasaina ho tapany amin'ny SSL: Protokolaina an-tanana, kaikitry ny Encryption, protocol protocol SSL, Change Cipher Spec.
Ny famoretana amin'ny WEP dia ny teknikan'ny fampiasana ny fahalemen'ny fiarovana amin'ny alàlan'ny rafitra lavitra ary ny fitomboan'ny tsy fankasitrahana.
Ireo mari-pamantarana izay maneho ny state of session SSL dia: Session identifier, Strategie compression, Otantication authentication, Mystery Master, Cipher spec.
Misy karazana fomba hiatrehana ny fiarovana ny Wireless Access Point: tsy mampita ny SSID, mampiasa WPA2 ary mampiasa ny MAC ny fizahana dia ny tena mahazatra indrindra amin'izy ireo.
Maka fito toetra momba ny Fisalasam-pahalalana momba ny fiarovana: Authentication, Tsiambaratelo, Fahazoan-dàlana, Fahamendrehana, Fahafahana, Tsy misy tsy fetezana, Fahavitrihana.
Ny seranan-tsambo dia ny toerana misy ny angona azo aleha amin'ny alalan'ny rafitra rehetra. Ny fanandramana ny seranana hahitana ny fisokafana loop ao amin'ny rafitra antsoina hoe Port Scanning.
Rafitra iray nampiasaina hanodikodinana olona ho an'ny angon-drakitra amin'ny alàlan'ny fanehoana fahamendrehana amin'ny tranonkala tsara toy ny Facebook na Hotmail, mba hampidirana ny mpanjifa miditra ao amin'ny rakitsoratra sy tsiambaratelo miafina. Nomena torolalana ny mpampianatra mba hahatsiarovan'ny mpanjifa an'izany ao amin'ny kilasy fianarana misimisy momba ny fiarovana.
Ampahany amin'ny fandinihana ny fandehanana mivezivezy eo amin'ny onjam-peo ary ampifandraisina aminy amin'ny fanafihana fantatra ihany koa. Raha toa ka misy andalan-tsamboana manamarina izany dia mahazo fampitandremana ny mpitantana.
Ireo rafitra nampiasaina hanohanana ny aterineto amin'ny aterineto?
Fikojakojana ny fitantanana, fametrahana azo antoka sy ny fametrahana rindrambaiko amin'ny serivera web, ny famindrana ny kaonty tsy ampiasain'ny sasany sy ny karazany, ny fikarakarana fikarakarana fandraketana, sy ny sisa.
Ny HIDS na ny Intrusion System Fanaraha-maso dia iray izay ahitana ny sarin'ny rafitra misy ankehitriny sy ny fahasarotam-panazavana amin'ny pasta taloha. Izy io dia manamarina raha niova na nesorina ny antontan-taratasy fototra, dia alefa any amin'ny mpitantana ny fanairana.
Fanamarinana Splunk - Fanontaniana sy valiny fanadihadiana